Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana ALAHADIN’NY EPIFANIA
Ny Filazantsara voalahatra ho antsika, dia tsy miresaka firy loatra ny amin’ny fahazazan’i Jesosy, Zanak’Andriamanitra.
Fa kosa toe-javatra anankiro mifamahofaho no tantarainy amintsika : Voalohany, ny fiderana sy fankalazana ary fanajana nataon’ny vahiny avy lavitra ; faharoa, ny fankahalana sy ny tsy firaharahana ataon’ny eo an-toerana an’i Jesosy. Miharihary eto ny fomba nandraisan’izao tontolo izao Azy, na teo amin’ny fahaterahany, na teo amin’ny fahazazany.
Ireo izay noheverina fa tsara toerana afaka ahalala sy anome voninahitra ary hanaja ny Mesiany dia tsy niraika taminy, tsy nihetsika akory na dia ny mba hizaha ny feo mandeha izay mampangorohoro ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana ary ny mpanora-dalàna mbamin’ny tananan’i Jerosalema rehetra.
Ny olona mahalala sy mahay ny Soratra Masina mikasika ny amin’Izay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy dia mbola variana loatra amin’ny rehaky ny fiainana, ka namela handalo fotsiny ny toe-java-miseho izay manandanja indrindra amin’ny tantaran’ny zanak’olombelona sy izao tontolo izao.
Jesosy, « Ilay Fahazavana tonga amin’izao tontolo izao sady manazava ny olombelona rehetra.dia tonga teo amin’ny taniny, fa tsy noraisin’ny mpiray firenena Aminy » ( Jaona 1 :9,11. DIEM ).
Eo andanin’izany kosa, ireo tsy manam-pahalalana sy tsy mahafantatra ny Soratra Masina ny amin’ny fihavian’ny Mpanjaka, ireo hafa firenena tsy manana ny mpaminany hovakiany dia tsy nisy famantarana nasehon’Andriamanitra azy afa-tsy ny kintana izay nitarika azy mandra-pahitany Ilay Mpanjakan’ny Jiosy, Mpamonjy izao tontolo izao.
Tsy nihevitra ny halavitry ny làlana, sy ny hasarotry ny diany izy ireo ; fa tonga niankohoka teo anatrehan’i Jesosy ka nanamarina ny maha-Mpanjaka Azy tamin’ny alalan’ny fanolorana volamena sy zava-manitra ary miora.
Ny toe-javatra hafa koa nitranga tamin’ny fahafantarana fa teraka ny Mesia na Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy, dia ny fihorohorona sy ny tahotra nanjo an’i Heroda mpanjaka tamin’izay fotoana izay.
Hafahafa ho an’ity mpitondra fanjakana mantsy ny fahafantarana fa misy Mpanjaka hafa voatendry hanjaka eo amin’ny fireneny teraka ao. Natahotra mafy Heroda, sady nanenika ny fony ny fialonana sao mantsy ho very seza sy voninahitra, koa dia nisaina hevitra ratsy hamonona ny Zaza izy ; namotopototra mangingina ny Magy tamin’ny fiatsarambelatsihy.
Ny tenako koa, hoy izy, dia naniry koa raha naniry mba handeha hiankohoka eo anatrehan’Ilay Mpanjaka vao teraka izay ! Mankalaza ny Epifania isika anio.
Maro amintsika no manatitra ny volatsika any amin’ny mpivaro-mofo ho takalon’ny galette des rois. Miezaka ahazo izay tena tsaratsara sy lehibe indrindra, mifandrombaka te ahazo ny satro-boninahitra. Diso isika satria fomba sy fety fanaon’izao tontolo izao ihany izany ; fa ny tena hevitra fototra sy ara-tSoratra Masin’ny Epifania dia ny fanambaran’Andriamanitra tamin’ny firenena jentilisa ny Famonjena izay namboariny ho an’izao tontolo izao.
Tonga nofo Andriamanitra ka nonina tamintsika olombelona. Manolo-tena hotsidihana sy hovangian’ny olona rehetra izay nosolon’ny Magy avy lavitra tena Izy.
Miditra eo amin’ny tontolom-piainantsika Andriamanitra ; mitsofoka eo amin’ny tantarantsika olombelona tokoa Izy tamin’ny nakany ny endrik’olombelona sy ny nitafihany ny nofo aman-drà tahaka antsika. Izany no teny Soa Mahafaly, ny tena hafatra entin’ny fankalazana ny Epifania ho antsika.
Voalazan’ny Filazantsara fa rehefa notarihan’ny Kintana ireo Magy avy any atsinana mandram-pahitany Ilay Mpanjakan’ny Jiosy vao teraka, Mpanjakan’ny Mpanjaka sady Mpamonjy izao tontolo izao dia niankohoka teo anatrehany izy ireo ; ary nanokatra ny vata fasiany rakitra ka nanolotra izay rehetra tao ho fanatitra ho an’I Jesosy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ny volamena ho mariky ny fiandrianan’ny mpanjaka ; ny zava-manitra ho an’ny maha- Andriamanitra Azy ; ary ny miora ho fanambarana sahady ny tsy maintsy iantrehany ny fahafatesana, dia Ilay fanolorana ny tenany ho Sorona ho famelana ny heloka sy ny fahotan’ny maro.
Volamena, zava-manitra, miora : tahiry nandritra ny fiainan’ny olona iray manontolo izany ; zavatra lafo vidy indrindra ireo kanefa nahafoy azy ho an’Andriamanitra Mpamonjy izao tontolo izao ny olona manam-pinoana tahaka ireto Magy ireto.
Fantany mantsy fa avy amin’Andriamanitra ny zava-tsoa teo aminy ka mendrika entina iderana sy ankalazana ary isaorana Azy. Ry Havana malala, inona no efa nataonao na hataonao hahitanao ny Mpanjaka sy Mpamonjy anao ? Inona sy inona no zava-tsaro-bidy sy manitra nafoinao sy hafoinao ka haterinao ho Azy ? Hoy ny Apostoly Paoly : « Atolory ny tenanareo ho an’Andriamanitra.ary ny momba ny tenanareo ho fiadian’ny fahamarinana ho an’Andriamanitra.
Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin’ny ota ianareo ka tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay » (Rom 6:13,22).Fa ny volamena sy ny volafotsy ary ny vatosoa dia an’I Jehovah Andriamanitra, Mpamorona sy Mpamonjy ary Mpanamasina antsika.
« Ary rehefa notoroan’Andriamanitra hevitra tamin’ny nofy izy tsy hiverina any amin’i Heroda, dia làlana hafa no nalehany nody ho any amin’ny fonenany ». Miteny amintsika androany ny Soratra Masina mba ampahiratra ny masom-panahintsika sy hanokafantsika ny fontsika hahita ny Kintana fitarikandro izay asehon’Andriamanitra amin’ny fiainantsika eo anatrehan’ny zavatra miseho sy mety hitranga.
Inona no ambaran’ity kintana ity amiko ? Inona no tian’Andriamanitra ampahafantarina ahy amin’izany ? Aiza no tian’Andriamanitra itondrana ahy ? Ary làlana manao ahoana no tiany alehako ? « Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana ; tsy misy mankany amin’ny Ray, afa tsy amin’ny alalako » ( Jaona 14 : 6) hoy ny Tompo.
Toy ireo Magy, dia tsy maintsy miala amin’ny sakana samihafa isika, mandray ka mizotra amin’ny làlam-baovao atoron’Andriamanitra antsika. Manova tanteraka ny fiainantsika « ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao ; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina »( Rom 12:2).